Vina Eran-tany ho an'ny Vondron'ny orinasa Kimroy Bailey - vondrona Kimroy Bailey
Fahitana eran-tany ho an'ny orinasa Kimroy Bailey
Fahitana eran-tany ho an'ny orinasa Kimroy BaileyKimroy Bailey2018-08-08T22:37:29-05:00
Tahaka ny any Heven ihany, dia ho tahaka ny et on an-tany. Tsy mino ny fandravana sy ny maizim-pito izahay. Ary tsy handray an'izao tontolo izao ny Robots. Ilay Andriamanitray no mitarika ilay fampisehoana. Mandrakariva ary mandrakizay!
Miresaka fiainana amin'ity orinasa ity izahay. Miresaka valiny tsara isika satria tiantsika ny hametraka ao anatin'ny fahafinaretan'Andriamanitra mahafinaritra, mavitrika, lehibe kokoa noho ny fisian'ny fiainana. Ny Popsie, Andriamanitra dia olona tsara sy mahafinaritra iresahana ary te hiresaka amin'ny mpikambana ao amin'ny fianakavian'olombelona izy. Miteny foana izy; vao afaka nihaino ny olombelona rehefa nandeha ny fotoana.
Ny vondrona Kimroy Bailey dia miteny sahy sy be herim-po. Mihazona ny masontsika mifantoka amin'Andriamanitra, miankina amin'Andriamanitra irery ihany isika ary izany no mahatonga ny Vondrona ho afaka amin'ny tahotra matahotra an'ity tontolo ity
Vondronay ny vondronay ho amin'ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fitiavana ny olombelona aseho eto an-tany. Io fitiavana tian'Andriamanitra asehony io dia hatao araka ny faniriany haneho ny hatsarany fa tsy araka ny fiheveran'izao tontolo izao ny atao hoe fitiavan'Andriamanitra na ny fampielezan'ny haino aman-jery ny fitiavan'Andriamanitra.
Ny vondrona Kimroy Bailey dia iray amin'ireo sambo maro azon'Andriamanitra ampiasaina sy ampiasainy hanatanterahana ny sitrapony eto ambonin'ny tany. Ireharehantsika ny ambany fehezin'Andriamanitra.
Ny tarika Kimroy Bailey dia tena mavitrika satria mavitrika ny lanitra. Midika izany fa manao zavatra amin'ny finoana isika ary io finoana io dia mankasitraka ny mpitarika antsika - Andriamanitra Ray aka "Popsie"
Vondronay ny vondronay ho amin'ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fitiavana ny olombelona aseho eto an-tany. Io fitiavana tian'Andriamanitra asehony io dia hatao araka ny faniriany haneho ny hatsarany.
Mamokatra harena be dia be ny vondrona ka tsy voafetra ho: vola ao amin'ny banky, tany manan-danja, fananana ara-tsaina manan-danja sy famoronana vaovao, marika ahafahany mampindrana firenena tomany ary tsy mila mindram-bola mihitsy. Raha te-mindrana isika dia mindrana fa tsy mila mindrana.
Fantatry ny orinasanay fa afaka mampiakatra zavatra izany satria momba antsika Andriamanitra. Nanorina io orinasa io Andriamanitra ary izy irery ihany no afaka handrava izany. Raha manao izany izy dia ny maha-prerogative azy - izany no antony mahatonga azy ho Andriamanitra. Ary raha manao izany Izy dia mila manangana antsika lehibe kokoa ary izany no ampahany mahafinaritra. Yeah Big and Better Baby!
Ny vondrona Kimroy Bailey dia hitondra any an'izao tontolo izao tolotra sy vokatra kalitao tsara indrindra amin'ny lafiny rehetra amin'ny orinasam-barotra marobe eto amintsika. Hahomby amin'ny zavatra rehetra ataontsika isika.
Ny vondrona Kimroy Bailey dia ho fananan'i Kimroy Bailey sy Sherika Trott-Bailey manokana sy ny taranany ihany no ho avy: Keilah Abigail Bailey sy ny Baileys ho avy. Izy ireo dia anisan'ireo sisa tavela amin'Andriamanitra eto an-tany ary toy izany koa ny taranany.
raha matahotra isika, raha matahotra, raha misalasala isika tsy manova ny zava-misy fa tsara daholo ny zava-drehetra sy ny fotoana rehetra i Popsie, mbola matanjaka foana, mbola mahalala daholo, mbola eo daholo
Ny fahitantsika manerantany dia tsotra be- Ny manao asa aman-draharaha amin'ny fomba sy ny fomba hanaovan'ny Fanjakan'ny Lanitra azy. Toy ny an-danitra any an-danitra no atao eto an-tany.
Tsy misy fanamarihana / fitsarana mialoha mialoha momba ny tokony ho toetran'Andriamanitra amin'ny orinasa-miorina, na avy amin'ny fiangonana miorina, ny baibolista, ny vondron'orinasa, ny mpandraharaha, ny mpitondra fivavahana, ny hery manohitra, ny media sns. Raha diso tafahoatra isika na nanao dingana diso dia hiditra ao an-danitra. Tsy mila mpiaro na mody ny lanitra.